MAQAAL: PUNTLAND DAWLAD GOBOLEED SHISHEEYE KU DAABAN – Balcad.com Teyteyleey
MAQAAL: PUNTLAND DAWLAD GOBOLEED SHISHEEYE KU DAABAN
Waxaa ku bilaabi doonaa qormadaan shir ka dhacay Magaalada Bahar Daar ee dalka Itoobiya 22-23 April 2017,shirka madaxda Africa ee Tana High Level Forum.(Natural Resource Governance in Africa) Shirkaan waxaa kasoo qaybgaleen Ra’iisul We’ve got an advantageous offer for your zyban needs. Check our store and get it only for 0.81 USD today! waaraha dalka Itoobiya, Hailumarim Desalegn iyo sidoo kale Madaxweynayaasha dalalka Brundi,Botswana,Liberia,Malawi,Nigeria,Sudan iyo dalka Maser.
Soomaaliyana kama aysan qaybgalin shirkaas waxaase ka qaybgalay Maamul Goboleedka Puntland.Madaxweyneha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo,oo ay soo gaartay casuumada Dawlada Itoobiya. ayaa ka cudur-daartay casuumaadaas waxaana durba soo baxay warar si hoose looga helay dad aad ugu dhaw Villa Somlia, waxeeyna tilmaameen in sababta uu Madaxweyne Farmaajo,ooga cudur-daartay casuumaadan ay ka dhalatay kadib markii mid taa lamid ah ay Dawlada Itoobiya soo gaarsiisay Madaxwenaha Mamaamul Gobaleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas,Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya wax war ah oo arinkaan ku saabsan ma aysan soo saarin ilaa iyo hada.
Madaxweynaha Maamul-goboleedka Puntland ayaa ka qaybgalay shirkaan wuxuuna kulan gaar ah la qaatay Wasiirka Arimaha Dibadda ee Itoobiya,Dr,Workneh Gebeyehu,kulanka dhex maray labadooda waxaa lagu sheegay in looga xoojo-naayay iskaashiga ka dhexeeyo Itoobiya iyo Maamulka Puntland ee ah ammaanka iyo Siyaasada. Itoobiya waa saxiibka weeyn ee Puntland marwalba sheegato.
Puntland waa maamul-goboleed iska la weeyn ama aan rabin in uu si wanaagsan ula shaqeeyo Dawlada dhexe ee Federaalka,Sida marar badanba horey u dhacday maamulkii iyo Madaxdii hore ee Maamulka Puntaland waxeey ahaa yeen kuwa markasto is hortaag iyo carqalad ku ah howlaha ay waday Dawlad Federaalka ah.
Madaxda iyo Siyaasiyiinta Maamulka Puntland waxeey markasto sheegtaan in ay yihiin Hooyada Ferderaalka lakiin marna masheekin,Yawaaye?AABAHA Federaalka,dadka Soomaaliyeed ciroole iyo carruurba leh waxeey kuu sheegayaan in Itoobiya tahay Abaha Federaalka
1.Puntland. Ma maamul-goboleed mise Dawlad madaxbaan?
2.Puntland. Ma saxeeb Itoobiya mise waa adeege aan ogeeynin danta laga leeyahay?
3.Puntland. Ma Dawlad-goboleed Soomaaleed mise mu’aamarad qarsoon?
Waxaa maanta oogan qorshihii ay Itoobiya ka leheed Federaalka tusaale ahaan Maamul Goboleedka Puntalan waxeey cadeesteen in ay sitoos ah ooga amar qaataan Taliska Itoobiya. hadana u baahneyn Dawlada dhexe ee Federaalka ah.Putland Madaxdeeda waxeey caan ku noqdeen in ay mucaaradnima iyo Khilaaf kala horyimaadan Dawlada Federaalka.
Waxaan wada xasuusanaa sidii uu ula dhaqmay Dawlada dhexe ee Xasan Sh.Maxamuud, Madaxwehii hore ee Puntland Cabdiraxman Faroole markii ay Midowga Yurub shir ugu qabatay Somalia magaalada Brussels,ee ah Xarunta Midowga Yurub September,2013 waxeey eheed dhacdo fuulxun oo naga bixisay muqaal xun oo lidi ku ah Qarannimada Soomaaliya waana sida ay Itoobiyaanku rabaan.
Dawlada Itoobiya waa Federaal ah 5 Qowmiyadood ah Madaxweyne yaashooda waxeey si toos ah ooga amar qaataan Dawlada dhexe ee Itoobiya mana ogalo in ay xitaa la kulmaan shimbir aysan iyadu ogeeynin hadii Itoobiya ay heeysato nidaam sidaas ah maxeey tahay sababta ay Soomaaliya faragalinta ugu heeyso oo maalinba mid ay luuq oola taagan tahay.Dad badan mafahan sana Siyaasadda Dawlada Itoobiya ee Federaalka ay kaleedahay waa inay Soomaaliya Dawlad La’aan sii ahaato waqti dheer.
Maamul-goboleedyadu dhib mise dheef?
Jawaabta uma maleeynaayo in ay tahay mid aysan ogeeyn dadka Soomaaliyeed intooda badan, waa mid iska cad Itoobiya waxaa maanta dhulka u taalo Soomaaliya, oo u eheed cadow dagaalo farabadan la soo gashay wax ka badan 85 sanadood.
Marka maanta oo ay Itoobiya heeysato taageero dad Somali ah iyo Madaxdooda iyo Afrikan dhaqaala doon ah iyo reer Galbeed la dhacsan doorka ay Itoobiya ku leedahay Mandaqadaan Geeska Afrika
Federaal Yaa Noo Keenay:
Waxaa markii ugu horeeysay oo dhagaha shacabka Soomaaliyeed, ay ku dhacdo magacan waxaa laga maqlay Dawladii Cabdullahi Yusuf 2004kii waxaana gadaal ka riixayay qorshahaan Ra’iisul wasaarihii hore ee Itoobiya Meles Zenawi.Cabdullahi Yusuf wuxuu noqday Mas’uul Soomaaliyeed kii ugu horeeyay oo ku dhawaaqo Federaal.
Wuxuuna ahaa Hogaamiyihii ugu horeeyay sameeyo Jabhad Hubeeysan SSDF,oo Dagaal ku soo qaaday Dawladii Kacaanka taas oo ay taageero iyo Hub ay soo siisay Itoobiya.
Marka aad xuuraansato dadweynaha ama aad sifiican ugu dhabo gasho,aaraa’da iyo aragtida bulshada ka qabto Federaalka,ayaa ciroole iyo carruur waxaa laguugu soo koobayaa waxaa laga keenay Kenya 2004kii waana qorshe ay wadato Dawlada Itoobiya iyadoo kaashanayso reer Galbeedka.
Federaal iyo Dhibaatooyinkiisa :
1.in muruqeenu kala miliqsanaado
2.in mabda’eenu kala duwanaado
3.manfacu kala soocnaado
Xiriirka u dhexeeyo Dawlad dhex iyo Maamul-goboleedyada maxeey tahay shaqda looga baahan-yahay in ay qabato Dawlada Federaalka, ee Dastuurka u ogal-yahay.
Waa tee shaqadas Maamul-goboleedayadu lee yihiin?
Hada aan joogno waxaa taagan carqalad iyo jahwareer ka dhex taagan xiriirka wada shaqeynta ee Dawlad dhexe iyo Dawlad-goboleedyada. Tusaale ahaan.Madaxwene Maamul-goboleed oo dalalka dariska ah laga casuumaayo dhahaayana waxaan lasoo galay heshiis!
Iyadoo aanan Dawlada dhex u wakiilanin amaba aysan wax war iyo wacaal ah toona ka heynin.waa QALAD,Arintaas.
waxaa wada xaajood iyo heshiis la wadaagi karto Dawladaha calaamka iyo Shirkadaha shisheeye kaliya Dawlada dhexe ayada ayuuna sharciga xaq u siinayaa.
Dawladaha maamul-goboleedkasto waxaa loo baahan yahay in loo cadeeyo wax sharciga ay ku goyn karto iyo wax aysan awood u laheynin marka laga hadlaayo arimahaan hoos ku qoran.
1. Difaaca wadanka
2. Xiriirka wadamada calaalamka(Foreign Policy)
3. Wadaniyada iyo Socdaalka
5. Daqliga canshuuraha
Dastuurka wuxuu leeyahay ama uu dhigaayaa Dawlad dhexe ayaa waxeey kaligeed xaq u leedahay in iyada looga danbeeyo arimahan sida Difaaca wadanka,Xiriirka wadamada caalamka,Wadaniyada,Socdaalka iyo Lacagaha.
Daqliga canshuuraha sharcigu wuxuu leeyahay halaga heshiiyo ama halaga wada hadlo.
Tusaale ahaan Dawlad Goboleedyadu waxeey leeyihiin waraasada Maaliyada mana qeexno wasaarada maaliyada Dawlada dhexe waxeey iyadu gooni u leedahay iyo waxa ay laqaybsaneeyso kuwa Maamul Goboleedyadu.
Hada waxaa muuqato in daqliga soo galo Dawlada dhexe uu ka yimaado kaliya Gobolka Banaadir intaas iyo wixii Dawarsi lagu soo helo ayeey Dawlada dhexe Maamushaa oo ay wax ka sii saa Maalmul Goboleedyada oo dhan.
Dawladii tan kahoreeysay ee Madaxweyne Hasan Shiiq waxeey ku mashquushay dhismaha Maalmul-goboleedyadii dhimanaa.Midaasna maanta waa lagaaray ayaan dhihi karaa,hada iyo wixii ka danbeeyo waxaa looga fadhiyaa Dawlada Farmaajo in ay dardar galiso dib u eegidda Dastuurka,dalka ayna ku sameeysaa qeexitaan dham.
Dawlada weey-heeysataa dad aqoon kartiba u leh arimahaan waana in ay tilmaamo iyo qibradba ka qaadato Dawladaha waaweeyn ee Federaalka ku soo dhaqmayay wax badan.
Su’aalaha Dawlada Looga Baahan-Yahay in ay Xalkooda la Timaado:
A.Yaa awood u leh in ay la macaamisho Dawladaha caalamka Maamul Goboleedyadu mise Dawlada dhex?
B.Sidee loo mideeyn karaa habka daqliga canshuuraha?
C.Waa kuwee awoodaha ay Dawlada kaliya xaq u leedahay?
D.waase kuwee awoodaha ay leeyihiin Maamul Goboleedyadu?
Hada waxaa noo muuqdo isku dhex yaac iyo carqalad ay caado ka dhigteen qaarka mid ah Maalmul Goboleedada.
Dastuurkeena Sharuucda iyo Siyaasada lagu dhisay Dawlad-goboleedyada oo ay ku jirtay kala jiid-jiidasho sida;Goboleysi, Qabiilaysi, Deegaaneysi,Kooxeysi,Shakhsiyeysi iyo Faragalinta Itoobiya iyo Reer-Galbeedka.
Diyaaradihii Qaadka iyo Maamulka Hir-shabelle:
Dawlad Goboleedka Hir-shabelle ayaa la sheegay wax yar kadib markii lamagacaabay Ra’iisul wasaare Kheyre ay ku dhawaaqaday in ay dib u hergalineeyso Dekedda iyo Airporka Maalmulkaas ee Ceel-macaan iyo Airoporka Cisaley.
Waxaana la sheegay in ay ka dhalatay Khilaaf u dhexeeyo Maamulkaas iyo Dawlada dhex ee Federaalka. Waxaana hada taagan Khilaaf aad u weeyn kadib markii Qaad laga dejiyay Magaalada Jowhar oo 90 KLM u jirto Magaalada caasimada ah ee Muqdisho.
Qaar ka mid ah Ganacsatada Qaadka ayaa sheegay in soodhaweyn wanaagsan ay ka heleen Mas’uuliyiinta Maamulka-Hirshebeele,isla markaasna Canshuur ka jaban
midii looga qaadi jiray Garoonka Muqdisho looga qaaday Jowhar.
Maamulkaan waxaa lagu tiriyaa kuwa ugu baarisan marka laga hadlaayo wada shaqeeynta iyo xiriirka u dhexeeyo maamul-goboleedyad iyo Dawlada dhexe markii hadii ay jirto wax tabasho waa in si dheqsiyo ah loo xaliyaa hadii kale Ganacsato ayaa meeshaas ka dilaal-noqon doonto. Waxaana Marakiimtooda lagu arki doonaa iyagoo alaabaha ku dejinaayo Dekedda-ceelmacaan.
Alla maanta waxaan midnimo ooga baahi badan-nahay majirto waxaan midnimo ahayn cadow nagama difaaceyso!
Is qabsataye yaa kala qaban doono?
fari kama qodno faanoole iyo fitnada Federaalka.
Maxaa loga hadlay Kulankii Golaha Wasiirada ku yeesheen Muqdisho?